Sida loo adeegsado sooyaal muuqaal ah oo muuqaal ah 'Zoom video calls | War gadget
Sida loo adeegsado sooyaal muuqaal ah wicitaannada fiidiyowga ee Zoom
Rafa Rodriguez Ballesteros | | Aplicaciones, Tababarada
Waxaan sii wadeynaa inaan si aad ah uga faa'iideysanno inta aan ka maleysan karno codsiyada wicitaannada fiidiyowga ah. Zoom ahaa, tan iyo markii xabsi khasab ah lagu bilaabay, mid ka mid ah isticmaaleyaasha ugu diiwaangashan adduunka oo dhan. In kasta oo wararka xanta ah iyo sheekooyinka qaarkood (oo loo malaynayo inay dhab yihiin) oo ku saabsan dhibaatooyinka amniga qaarkood ee uu soo bandhigay ay ku dhammaadeen inay isaga wax yeelaan. Runtu waxay tahay inay wali haysato isticmaaleyaal tiro badan oo firfircoon oo u adeegsada App isgaarsiintooda maalinlaha ah.
Maanta waxaan kuu keenaynaa a cashar gaaban oo loo adeegsado qalab aad u xiiso badan oo waxtar leh. Shaqadan taleefanka, maahan kuwa fulinaya oo dhan meel ay kuxirantahay ujeedadaas. Kuwo badan ayaa ku khasbanaaday inay maskaxdooda soo jiidaan oo xafiis ka dhigaan koone bilaash ah oo guriga ka mid ah. Y markaan wacno fiidiyow, gaar ahaan heer xirfadeed, Uma muuqato wax fiican in lagu arko sariirteenna, jikadayada ama garaashkeenna xagga dambe halka ay ahayd inaan helno.
1 Asalka wicitaanadaada fiidiyow ma sii ahaan doono qolkaaga
2 Ku dhaqaaji asalka istiraatiijiga ah Zoom talaabo talaabo ah
3 Markii aan bilowno wicitaanka ama aan ku soo biirno
4 Isku-hagaajin fudud oo sawir fiican laga bixinayo
Asalka wicitaanadaada fiidiyow ma sii ahaan doono qolkaaga
Zoom wuxuu na siiyaa suurtagalnimada adeegsiga asalka dalwaddii taas oo noo oggolaan doonta inaan ku bixinno muuqaal aad u badan oo xirfad leh wicitaannada fiidiyowga. Intaas waxaa sii dheer, tani waxay sidoo kale u adeegi doontaa in qeyb ahaan loo ilaaliyo arimaha gaarka ah ee gurigeenna iyo taas cidina runtii maahan inay aragto halka aan joogno. Haddii goobtaada shaqada, ama meeshii lagaa rabay inaad ku rakibto qalabkaaga shaqada (xilliga firaaqada) uusan laheyn asal weyn oo ka mid ah buugaagta buugta lagu qoro oo ay ka buuxaan buugaag qurux badan, waad jeclaan doontaa qalabkan.
Haddii aan qabaneyno shir muhiim ah ama shir ganacsi aad ayey muhiim u tahay xiriir wanaagsan, in aan heysano wanaag Sonido. Sidoo kale waa muhiim in sameynta fiidiyowga waxaan u eegay si fiican meel. Y sidoo kale waa faahfaahin si loo tixgeliyo asalka sawirka uu wehelkayagu arki doono. Sidaan dhahno, qaar badan oo ka mid ah ma haystaan ​​ikhtiyaar marka laga reebo inay naftooda dhigaan meel ay wax ka banaan yihiin, laakiin haysashada mashiinka dharka lagu dhaqo ee gadaasha ayaan u muuqan wax aad u wanaagsan, sax
In codsiyada kale ee ka sii wanagsan ee wicitaanka fiidiyowga sida Skype waxaan horey u haysanay ikhtiyaar loogu daro asalka dalwaddii. Oo kani waa si sax ah qalabka ay Zoom bixiso oo ku saabsan maanta aan u sharaxeyno sida loo isticmaalo. Ku dhejinta taariikh muuqaal ah wicitaanadeena fiidiyowga waxay ka caawin doontaa wada-hawlgalayaasheena inay diiradda saaraan annaga iyo waxa aan dhahno. Adiguna mar dambe uma baahnid inaad ka walwasho qaybta guriga ee la arki karo.
Haddii aydnaan wali soo degin App-ka casriga ah ee wicitaannada fiidiyowga ah halkan ayaan kaaga tagaynaa kala soo deg linkiga macruufka:
Shirarka Daruuraha ZOOM
Developer: Zoom Video Isgaarsiinta, Inc.
Oo halkan waxaad ka soo degsan kartaa App-ka haddii aad tahay Isticmaalaha Android:
Kulamada Cloud ee ZOOM
Ku dhaqaaji asalka istiraatiijiga ah Zoom talaabo talaabo ah
Si asalka dalwaddii ee wicitaanadaada fiidiyow waa waxa aad u baahan tahay Waxaan kuu sharaxeynaa talaabo talaabo ah sida loo isticmaalo. Marka hore, mar haddaan helnay akoonkeenna Zoom, waxay noqon doontaa in wax laga qabto dejinta koontadayada adoo gujinaya «qaabeynta«.
Laga soo bilaabo goobaha waxaan ka hawlgelin doonnaa ikhtiyaarka "Sanduuq dhaqaale". Mar alla markii aan ikhtiyaarkan shaqeysiinno, markii aan wicitaan fiidiyoow ah ku biirineyno kulan ama aan abuureyno kuweenna, waxaan dooran karnaa nooca asalka ah ee aan dooneyno inaan adeegsanno.
Waa inaan maanka ku haynaa taas asalka aan gadaal ka joogno saameyn ayuu ku yeelan doonaa markay tahay adeegsiga mid dalwad ah. Meelaha xirfadleyda ah waa wax caadi ah in lagu arko asal cagaaran oo cagaaran, oo loo yaqaan 'chroma'. Marka laga soo tago asalkaani way fududahay in la qorsheeyo sawirro ka soo baxa qofka kaamirada hortiisa ah. Haddii aynaan haysan sanduuq sidan oo kale ah (kaas oo caadi noqon doona) kooxdeena waa inay software-ka hagaajiyaan qolka qoto dheer si aad u awoodo inaad adeegsato asalka istcimaala.
Waxay noqon kartaa kiiskaas kooxdayadu ma haysato awood ku filan si loo soo saaro iyada oo ku xidhan dhibaatada nidaamka la soo gudboonaata, laakiin sida caadiga ah, asalka asalka ah wuxuu u muuqdaa xitaa iyadoo la adeegsanayo casriga. Barnaamijku wuxuu la kulmaa dhibaatooyin marka maaliyaddeennu aad u qoto dheer tahay ama hel kuwo badan caqabadaha oo leh qaabab ama cabbirro kala duwan. Ujeeddadu waa inaan isku dhigno asal jilicsan Dhanka dambe. Waxaan leenahay ikhtiyaarka ah hagaaji codka asalka sidaa darteed sawirka "la odorosay" wuu ka midaysanyahay.
Markii aan bilowno wicitaanka ama aan ku soo biirno
Markaan abuurnay kulanka, ama aan ku biirno kulan ay abuureen isticmaaleyaal kale ...
1 - Waa inaan doorannaa inaan ku biirno kaameradda, makarafoonka, ama labadaba.
2 - Waxaan dooranaynaa astaanta ka muuqata qaybta bidix ee hoose halkaana aan ku dooranayno ikhtiyaarka «Virtual Fund».
3 - Waa inaan iska baarnaa (waxay kuxirantahay kiiska) ikhtiyaarka ah "Waxaan haystaa shaashad cagaaran" si nidaamku u hagaajiyo asalka dalwaddii midka jirkeena gadaashiisa.
4 - Waa waqtigii la kala dooran lahaa ikhtiyaarrada maaliyadeed ee la heli karo. Waxaan ka dooran karnaa kuwa jira, soo dejisan karnaa waxyaabo dheeri ah oo arjiga laftiisa na siiya, ama haddii aan doorbidno, waxaan dooran karnaa sawirkeenna oo aan toos ugu isticmaali karnaa asal ahaan.
Imtixaankan waxaan ku soo xulnay sawirka badda asalka sawirka, in kasta oo xagasha la doortay aysan fiicnayn, waxaan si fiican u heli karnaa fikrad ah sida asalka u muuqdo inta lagu jiro wicitaanka fiidiyaha.
Isku-hagaajin fudud oo sawir fiican laga bixinayo
Sidaad aragtay, dhowr hab oo qaabeyn fudud ah ayaan ku bixin karnaa muuqaal asal ahaan ka duwan, ama xirfad badan, ama haddii aan rabno inaan la falgalno sooyaal xiiso leh. Ama si fudud si aan gadaal uga dhigno taariikh aan jecel nahay iyo in aan rabno in aan la wadaagno inta hartay ee wada-hadalada wadahadalka. Dhaweyd hagaajinaysaa baahiyaheenna waxayna siineysaa suurtagalnimadaas in goobta shaqadeena aysan saameyn ku yeelanaynin sawirka in aan mashruuca.
Sidaan kuu sharaxnay, nama waxaan u baahanahay wax badan oo ka badan asalka sida ugu macquulsan u siman si barnaamijka App uusan u dhib gaarin, ama uu si toos ah noogu sheego in sanduuqa la doortay aan lagu dhaqmi karin. Khibraddu way sii fiicnaan doontaa iyadoo lagu saleynayo sawirka asalka ah ee aan dooranno, iyadoo kuxiran duruufaha, iyo ahaan doona waxtar badan oo "xirfad leh" haddii aan awoodno inaan ku tiirsanaano a asalka, marka lagu daro jilicsanaanta, cagaarka. Wax haddii aan suurta galno inaan isku dayno, waxaan ogaan doonaa horumar weyn.
U fiirso barnaamijyada ugu fiican ee wicitaanada fiidiyaha kooxda
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Tababarada » Sida loo adeegsado sooyaal muuqaal ah wicitaannada fiidiyowga ee Zoom
Siideynta Netflix, HBO iyo Disney + ee Meey 2020
Sida loola shaqeeyo faylasha PDF ee Microsoft Edge Chromium